Sidee lacag looga sameeyaa guriga: meheradaha aad yeelan karto | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Encarni Arcoya | | Dhaqaalaha guud
Waxa jira dad badan oo shaqo la’aan ku hadhay, iyo in yar oo kale oo arkay mushaharkooda oo la dhimay, mararka qaarkoodna sidoo kale saacadahooda shaqo. Sidaa darteed, kuwa raadinaya inay lacag ka kasbadaan guriga, waa inay ogaadaan inay jiraan fursado ay ku heli karaan. Ma taqaanaa sida?
Marka xigta waxaan dooneynaa inaan ku caawinno, haddii aad ku jirto raadintaas, si aad u ogaatid Sidee lacag looga helaa guriga, ka ugu fudud ilaa meheradaha ganacsi ee ku soo baxay shaqo yaraanta awgeed, ama keenay farsamooyin cusub.
1 Sida lacag looga kasbado guriga oo loogu daro shaqo kale
1.1 Noqo tifaftiraha khadka tooska ah
1.2 Caawiyaha Virtual
1.3 La taliyaha ganacsiga
1.4 Iibi koorsooyinka ama noqo saamayn
1.5 Sida lacag looga sameeyo guriga: Dukaankaaga internetka ee kuu gaarka ah
1.6 Sawir qaade
1.7 Sidee lacag looga sameeyaa guriga: Macalinka Virtual
Sida lacag looga kasbado guriga oo loogu daro shaqo kale
Xaaladaha laga yaabo inaad isku aragto waxay marayaan labo: ama shaqo ma lihid waxaadna isku dayeysaa inaad hesho wax kaa dhigaya inaad biilasha ku bixiso oo aad nolol caadi ah ku noolaato (ama ugu yaraan isku day, gaar ahaan haddii aad reer leedahay eedeymaha). Midda kale waa inaad shaqo leedahay laakiin tan mushaharka ayaa laga dhimay ama kuma filna inaad la kulanto biilasha aad haysato.
Wax kastoo dacwadaada ah, waxaa jira qaabab aad lacag uga kasban karto guriga. Ma rabtaa inaad ogaato waxaani waxay noqon karaan? Ujeeddada:
Noqo tifaftiraha khadka tooska ah
Haddii aad ku fiicantahay qorista, oo aad waliba si fiican u taqaanno maado, mid ka mid ah siyaabaha lacag looga helo guriga waa tan, iyada oo loo marayo ereyga. Waana inaad awoodid noqo qoraa ama qoraa khadka tooska ah. Dabcan, maskaxda ku hay inay jiraan dad badan oo u heellan tan, aqlabiyad ballaaran oo waqti-buuxa ah, oo ah kuwa madax-bannaan, runtiina waxay tahay, haddii aad fiicantahay, waxaad kasban kartaa lacag badan.
Xaaladdan oo kale, adigu waxaad tahay maamulahaaga, waxaad shaqaysaa saacadaha aad rabto iyo inta aad la kulanto waqtiyada kama dambaysta ah, waa inaadan wax dhibaato ah qabin. Hadda, helitaanka shaqo mushahar fiican qaata ma sahlana, sidaa darteed haddii aadan khibrad badan lahayn, marka hore waxaad u baahan tahay inaad dejiso shaqooyin qaarkood oo aan mushahar fiican bixin ka dibna aad fuulid iyo wixii ka sarreeya oo aad naftaada u sheegto si aad adigu u ogaato hel qiimo wanaagsan.
Mid ka mid ah shaqooyinka sii kordhaya ee bushimaha dad badani waa kaaliye caawiye ah. Waa nooc xoghayn, ama xoghaye meesha, halkii looga baahnaan lahaa inuu joogo meel xafiis ah, waxa la qabtay ayaa ah inuu ka shaqeeyo guriga. Intaas oo kaliya maahan, waxaad qaadan kartaa dhowr shirkadood (ama dad) isla waqti isku mid ah, maadaama haddii aad qorsheyso taasi aysan dhibaato noqon doonin).
Xaaladdan oo kale, waxaad leedahay jadwal jilicsan (maxaa yeelay waxaad ka dhigi kartaa mid la jaanqaadi kara si aysan macaamiisha u isdul marin, u yeerin wicitaano deg deg ah, ballamo, iwm.) Waxaadna ku dallaci kartaa qiimaha / saacadda aad rabto (had iyo jeer la xaajood macmiilkaaga, dabcan).
Xagga meesha laga shaqeynayo, waxaad raadin kartaa guddiyada shaqada, goleyaasha, shabakadaha bulshada ee xirfadda leh sida Linkedin ... Maskaxda ku hay in tani hadda ay korayso, iyo in kastoo ay jiraan dad badan, haddii aad taqaanid sida wax loo iibiyo, shaqo ayaad ka heli kartaa tan.
La taliyaha ganacsiga
Xaaladdan oo kale, si aad lacag uga hesho gurigaaga lataliye ahaan, waa inaad aqoon fiican u leedahay maadooyinkaas. Tusaale ahaan, haddii aad baratay dalxiis, waad caawin kartaa shirkadaha dalxiiska, laakiin ma caawin kartid shirkadaha dhallaanka, tusaale ahaan. Laakiin Haddii aad baratay maamulka ganacsiga iyo maareynta, tani waa hab lagu caawiyo guriga (iyo qiimo ka hooseeya jir ahaan). Intaas waxaa sii dheer, waxaad lahaan kartaa dhowr macmiil oo waxa ay ku saabsan tahay la talinta shirkadaha ama xirfadleyda (madaxbanaan, shirkadaha, jaaliyadaha, iwm) ee ku takhasusay ganacsiga. Waxaad sidoo kale takhasus u yeelan kartaa xalinta dhibaatooyinka ganacsiga, farsamada ama dhibaatooyinka ururada.
Iibi koorsooyinka ama noqo saamayn
Si la mid ah tan kor ku xusan, inaad tahay la-taliye, qaab kale oo aad lacag uga kasban karto guriga waa inaad ku iibiso koorsooyinkaaga, ama fiidiyoow ama warqad. Waxa ay ku saabsan tahay waa taas qor ajandaha, ama ka sheekee oo ugu sharax fidiyow, ka dibna adiga lacag ka bixi. Waxaa jira dad badan oo, qiimo yar, laga yaabo inay xiiseynayaan, oo haddii aad ku sameyso mowduucyo aad xiiseyneyso, sida xaqiiqda ah waxyaabahaas ayaa faafin doona.
Markaad ka hadasho fayraska, ikhtiyaar kale ayaa ah inaad noqotid mid saameyn ku leh waxyaabahaas. Waxaad ka abuuri kartaa kanaal Youtube, Twitch, Instagram, iwm. oo samee fiidiyowyo sharraxaya dhibaatooyinka ama arrimaha aad u aragto inay yihiin dan guud.
Maskaxda ku hay in labada ikhtiyaarba si fudud dib loogu heshiin karo.
Sida lacag looga sameeyo guriga: Dukaankaaga internetka ee kuu gaarka ah
Haysashada dukaan internetka macnaheedu maaha inaad iibinayso alaabada dadka kale, iyaguna way noqon karaan kuwaaga, maaddaama aad abuuri karto alaabada guryaha lagu sameeyo oo aad iib gelin karto. Tusaale ahaan, ka soo qaad inaad ku fiican tahay samaynta saabuunta; Waxa aad sameyn karto waa sameynta degel aad ku iibin karto noocyo kala duwan oo saabuun ah oo aad raacdo istiraatiijiyad suuqgeyn ah si aad macaamiisha ula xiriirto.
Qaab kale ayaa ah in la sameeyo raashin macmal ah, ma qiyaasi kartaa inta qof ee kaa codsan karta cuntada guriga lagu sameeyo? Xaqiiqdii laga bilaabo caruurtaada.
Haddii aad ku fiican tahay sawir qaadista, xulashooyinka sida lacag looga helo guriga waa tan, qaadashada sawirro iyo ku iibinta bangiyada sawirka. Mar kasta oo qof adeegsado sawirkaaga waxaad ka macaashaysaa, taas oo kaa caawin doonta maxaa yeelay xitaa uma baahnid inaad dibadda u baxdo oo aad wax iibiso, kuwa kale ayaa haddaba kuu samaynaya.
Waxaan ku talinaynaa taas waa sawirro la socda isbeddellada socda, oo labaduba ah kuwo asal ah oo hal abuur leh; habkan waxaad heli doontaa fursado badan oo aad uga dhex muuqato tartanka.
Sidee lacag looga sameeyaa guriga: Macalinka Virtual
Tiknoolajiyada cusub, iyo xaqiiqda ah in qaar badan oo ka mid ah la xiray, ayaa u oggolaatay tirada cusub inay ku dhasho tababarka iyo waxbarashada: macallinka farsamada. Runtii maahan wax cusub, maxaa yeelay horayba way u jirtay, laakiin waa wax la xoojinayo, oo keliya ma aha koorsooyinka dadka waaweyn, laakiin xitaa kuwa qaangaarka ah iyo carruurta.
Maadooyinka waa kuwo aad u kala duwan, xitaa waxaad ka heli kartaa waxbarashada jimicsiga, tababaraha shaqsiga, iwm.
Fikradaha ku saabsan sida lacag looga helo guriga way badan yihiin, laakiin waxa ugu muhiimsan ayaa ah inaad doorato mid ama in ka badan oo aad ku kalsoon tahay inaad ku shaqeyso. Maskaxda ku hay inaad haysan karto waqti badan oo aad ku horumarin karto; Ama waxaad haysataa wax yar, markaa haddii ay tahay wax aad jeceshahay oo aad baratay, way fududaan doontaa inaad u huro waqtigaas maalgashiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Sidee u helaan lacagta guriga?
Fikrado ganacsi oo cusub